Fihaonana ara-diplaomatika : Nanamafy fiaraha-miasa amintsika i Canada -
AccueilRaharaham-pirenenaFihaonana ara-diplaomatika : Nanamafy fiaraha-miasa amintsika i Canada
05/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fandraisan’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, ny masoivohon’i Canada, Sandra Mc Cardell, dia noraisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka, indray ny tenany omaly, tetsy amin’ny birao foiben’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE) etsy Anosy.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’ity masoivohon’i Canada, Sandra Mc Cardell, ity fa vonona hatrany hanampy an’i Madagasikara izy ireo eo amin’ny lafin’ny fampandrosoana ara-toekarena. Nambaran’ity masoivoho vahiny ity ihany anefa fa tsy afaka mandroso ny firenena raha tsy misy ny fitoniana politika. Izay indrindra no nahatonga an’i Sandra Mc Cardell nilaza fa maro ny dinika nifanaovany tamin’ny minisitra Henry Rabary-Njaka amin’ny tombontsoan’ny firenena. “Araka ny fantatrareo tsara, dia tonga eto i Canada ho amin’ny tontolo ara-toekaren’i Madagasikara. Efa misy ny tetikasa hiarahana ato ho ato, ary efa mandray an-tanana izany rahateo i Canada”, hoy ity masoivoho vahiny ity.
Ankoatra izay, nidinika mahakasika ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta taorian’ny fahatomombanan’ny fandraisan’i Madagasikara ny Fivoriamben’ny Frankôfônia andiany faha-16, ny minisitra sy ity masoivoho vahiny ity tamin’izany.
Nambaran’ny minisitra Henry Rabary-Njaka kosa, fa anisan’ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara i Canada. “Namatsy vola tamin’ireo tetikasa goavana i Canada, toa ny seranan-tsambon’i Ehoala, ny QMM ary ny tetikasa Ambatovy, sns. Ankoatra izay, anisan’ireo firenena nahatomombana tsara ny fandraisana sy fampiantranoan’i Madagasikara ny fivoriamben’ny Frankôfônia i Canada. Noho izany, mitohy ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta”, hoy ny minisitry ny MAE.
OMC : Hokarohina ireo mpanely tsaho
Fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, sy fanakorontanana saim-bahoaka no nisy omaly manoloana ny fanelezana tsaho sy vaovao tsy marina hoy ny OMC, ka enjehin’ ny lalàna izany, noho izany tsy hikely soroka ny eo anivon’ ny OMC ...Tohiny
Andry Rajoelina : Nopaingorin’ny RFI
Vondrona Afrikanina : LANY HO FILOHA VAOVAO ALPHA CONDÉ
Asan-jiolahy : 130 no maty